Maldives - kichin
Ịdọrọ na Maldives abụghị nanị na ị na-ezumike egwu, mmiri nke oké osimiri na snow na-acha ọcha. Ọ bụkwa mmeghe nke ọdịnala oge ochie agwaetiti, yana nsị nke efere nke nri mba. Iji mee ka mba ahụ zuru ezu, ọ dị gị mkpa ịbanye n'ime paradaịs gastronomic nke agwaetiti .
Atụmatụ nri nri Maldivian
Achịcha ọ bụla, na-eje ozi na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị na mpaghara, dị iche iche site na nhazigharị ya, nkwalite nke imewe ma mee ka agụụ rie ndị na-eri nri. Ihe oriri nke Maldives na-ejikọta ọnụ ọgụgụ Indian, cultivation Thai na Chinese. Ihe ka ọtụtụ n'ime efere ndị dị na efere nwere osikapa, ụdị nri dị iche iche, karịsịa curry, aki oyibo, ihe ọṅụṅụ lemon na ofere azụ (garudium). Nri nri ndị dị iche na nri na Maldives dị na Telly fiya (eghe eyịre eyịre).
Ebe dị iche iche nwere mkpụrụ osisi na-eto n'àgwàetiti. A na-eji pineapples, mangoes, mkpụrụ osisi na unere mee ihe na nkwadebe nke desserts. A naghị ahụ akwụkwọ nri na tebụl Maldivian, yana ọkụkọ na àkwá. A na-ejikarị anụ ọkụkọ eme ihe nanị n'oge pụrụ iche. Ma nri nke Maldives bụ ihe jọgburu onwe ya n'enweghị azụ, nke a pụrụ ịchọta na ụdị ọ bụla. A na-esi na-ewu ewu karịsịa, na-ese anwụrụ ọkụ na nke a mịrị amị. Azụ na osikapa, aki oyibo, eyịm, ihe ọṅụṅụ lime na chili bụ ihe ndabere maka nri nke ndị agwaetiti ahụ.
Achịcha nri nri nke Maldives
Ịgagharị na mba ahụ, ịnweghị ike ịnwale:
Pasta "Mas Huni" , nke a kwadebere site na ejiji anwụrụ ọkụ, nke a gwakọtara ya na yabasị, aki oyibo na chili;
azụ azụ "Kuli Borkiba" - nri a na-acha osere nke azụ azụ na mgbakwunye nke ibe aki oyibo;
salad sitere na eyịm "Fiya Satan" - nri ala kachasị mfe, nke gụnyere ihe mgbakasị yabasị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na marinade sitere na mmiri ude;
acha odo odo na skwọsh nke "Torah Cypress" - snoo soda site na torus (ụdị zucchini), flavored na curry, ngwa nri na chili ose;
azụ azụ "Badzhiya" na "Gulha" n'ụdị envelopu na bọl jupụtara na tuna, ginger, yabasị, magnolia vine na chili;
osikapa na-eme ka "Handulu Bondibay" - ihe oriri na-ewu ewu Maldivian na ude mmiri oyi;
nut na-eji megharịa ọnụ "Dhufun" , nke a kwadebere site na ntutu nke na-acha ọcha ncha, nke a na-agbanye dị iche iche ngwa nri na mpempe akwụkwọ peppercorn.
Ihe ọṅụṅụ ndị omenala
Na nri nri mba, Maldives na-aṅụbiga mmanya ókè - ọ nwere ike zụta ya na yachts tourist, na hotels na na ụlọ ọrụ na-free ụlọ ahịa na ọdụ ụgbọ elu . Ndị amaala mba ọzọ ndị natara ikike pụrụ iche nwere ike ịchekwa mmanya n'ime ụlọ ha, ma ọ bụ maka iji onwe ha.
E nwere ọtụtụ ụdị mmanya ọṅụṅụ na-abaghị uru, ma mmepụta obodo na nke mba ọzọ. Ihe kachasị ewu ewu bụ ndị na-adịghị egbu egbu - ihe a na-achọpụta nke osisi nkwụ mara mma. N'elu agwaetiti buru ibu nakwa na nwoke, ọ dịghị atụ aro ka ị ṅụọ mmiri pọmpụ (n'ime ụlọ ndị niile nwere mmiri mmiri).
Kitchen nke Indonesia
Gburugburu ọkụ nke South Korea
Ememe na Laos
Ezigbo njikọ Ezinigwe
Ala nke Malaysia
Ebe nkiri Nepal
Ememe na Cambodia
Maldives - ihu igwe site na ọnwa
Kedu ihe iji hụ Singapore na ụbọchị 2?
Ịchọpụta nke ọma nke ndị na-eto eto
Salad na tangerines - na-achọ nri nri nri na ihe dị iche iche nchịkọta ihe
Sofa na-akwalite maka nwata ahụ
Tea na ginger - ụzọ kachasị mma nke ịmepụta ihe ọṅụṅụ dị mma
Bern Bern Dog
Akpụkpọ ụkwụ 2013
Enwusi mkpuchi maka ihu gbaa gburugburu - 57 foto nke nhọrọ kacha mma
Ejiji maka ejiji na-acha anụnụ anụnụ
Mkpụrụ osisi Tiramisu
Olee otú iji weghachi mmekọrịta gị na onye ị hụrụ n'anya?
Kedu ka esi eto eto n'ulo?
Grail Gral - gịnị bụ ya na ebee ka ọ dị?
Ọrịa nke erysipelas na ụkwụ - mgbaàmà
Kọfị kọfị maka ntakịrị ihe osise: foto
Kedu esi ehichapụ ihe si na akwụkwọ ahụaja?
Olee otú iji nagide obi ụtọ ahụ?